कोरोना विरुद्धका खोप: कानुनी बाटाे खुल्याे, भण्डारण समस्या, क्षमता थप्ने तयारी - ९ मंसिर २०७७, NepalTimes
काठमाडौ: कोरोना भाइरसको खोप बनेको समाचार दैनिक रुपमा आइरहेका छन् । खोप बनेसँगै त्यसको अन्तिम परीक्षण गर्ने र त्यसलाई कसरी विश्वका सबै देशमा पु¥याउन सकिन्छ भनेर कोभ्याक्स टिम (विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र विश्व बैंक) तयारी थालेको छ ।
त्यस्तै नेपालमा विगतदेखि नै भण्डारण गर्दै आएको र २ डिग्रीदेखि ८ डिग्रीसम्मको आठ लाख डोज भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग रहेको डा. शर्माले भन्नुभयो ।
महामारी तथा संक्रमणका बेला सहज रुपमा खोपका भाइलहरु ल्याउन सहज बनाउन नेपालले कानुनी बाधा अड्चन फुकाउने प्रयासस्वरुप राष्ट्रपतिबाट एउटा अध्यादेश स्वीकृत भैसकेको डा.शर्माले बताउनुभयो । ‘औषधि ऐन २०३५ का केही प्रावधान संशोधन गर्न ल्याइएको यो अध्यादेशले आपतकालीन रूपमा औषधि तथा यस्ता खोप ल्याउने कानुनी बाटो खुला भएसँगै त्यसको भण्डारण कसरी गर्ने भनेर प्रयास गरिरहेका छौ’ डा.शर्माले भन्नुभयो । यो अध्याधेश आएपछि नेपालले अरु देशमा कोरोनाको खोपको राम्रो काम गरेमा नेपालमा सिधै दर्ता भएर सो खोपको प्रयोग गर्न सकिने बाटो खुला भएको हो ।
के नेपालले पहिलो लटमा खोप किन्न सक्छ कि सक्दैन ?
अरु देशले पाउँदा नेपालले पनि सुरुकै लटमा खोप पाउने नेपालका सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।